Raysul Wasaare Cabdi Weli oo Addis Ababa kula kulmay safiirrada Carabta – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Raysul Wasaare Cabdi Weli oo Addis Ababa kula kulmay safiirrada Carabta
16th February 2014 A warsame Af Soomaali 0
Addis Ababa – Mareeg.com: Ra’iiusl Wasaaraha Soomaaliya iyo Wafdigiisa ayaa xalay Addis Ababa kula kulmay Safiirada dalalka Carabta u fadhiya Ethiopia oo uu kala hadlay xiriirka dheer ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Caalamka Islaamka isla markaana waxaa uu sharaxaad ka bixiyay qorshaha Xukuumaddiisa xiliga iyo waxyaabo ay hiigsanayso si loo gaaro xasilooni iyo dib-u-dhiska dalka kadib burbur dheer oo ku dhacay dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Safiirada uu la kulmay Ra’iiusl Wsaaraha ayaa sheegay sida ay uga xun yihiin dhibaatadii dalka, waxaana ay sheegeen in ay garab istaagi doonaan Dawladda iyo Shacabka Soomaaliyeed ee walaalaha ah. Mas’uuliyiintan ayaa tilmaamay dhibaatada ay leedahay Argagixisada iyo Isbadalada ka dhacaya dalka Soomaaliya.
Dhanka kale waxaa uu Ra’iiusl Wasaaraha iyo Wafdigiisu ayka qayb galeen Casho-sharaf uu u sameeyay Wasiirka Arimaha Dibadda ee dalka Ethiopia. Mudane Tedros Adhanom Ghebreyesus kadib kulankii maanta uu Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya kula kulmay Wasiirka.
Ra’iiusl Wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed iyo Wasiirka Arimaha Dibadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa galinkii danbe ee maanta kulan dheer la qaatay Wasiirka Arimaha Dibadda Ethiopia Tedros Adhanom Ghebreyesus iyagoo ka wada hadlay sii xoojinta xiriirka labada dal iyo kordhinta iskaashiyo kala duwan oo labada dal ay ka yeeshaan arrimaha ay kamid yihiin amniga labada dal iyo sidii Soomaaliya ay horay ugu socon lahayd.
“Waxyaabo badan ayaa naga dhexeeya dawladaha dariska sida Ethiopia, waxaa jira caqabado saamaynaya amaanka dalalkeena oo loo baahan yahay in aan iska kaashanno. Waxaan uga mahadnaqaynaa Ethiopia oo qayb ka ah Amisom taageerada ay ka gaysanayso dhanka amaanka.” Ayuu yiri Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Cabdiweli Sheekh Axmed.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa ka warbixiyay dadaalka ay dawladdiisu ugu jirto dib u dhiska hay’adaha dawladda, kaabayaasha dhaqaalaha iyo sugidda amniga dalka oo dhibaatooyin ay ku hayaan kooxaha Nabad-diidka ah, isagoo intaasi ku daray in la gaaray xiligii laga guulaysan lahaa kooxahaas isla markaana loogu istaagi lahaa dib-u-dhiska dalka.
Wasiirka Arimaha Dibadda Ethiopia Ethiopia Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa sheegay in Ethiopia ay diyaar u tahay ka qayb-qaadashada dhinacyada amniga iyo tababarka ciidamada Soomaaliya, tedros ayaa sheegay in Soomaaliya ay u muuqato in ay soo kabanayso.
“Isbadal ayaa ka muuqda Soomaaliya xiligan, waa in aan ka hor-imaanaa kuwa ku fikiraya in Soomaaliya ay kusii jirto dhibaatada. Waxaan idinka taageeraynaa ciidanka iyo tababarada si aan looga mira dhaliyo isbadalka cusub ee Soomaaliya.” Ayuu yiri Wasiirka Arimaha Dibadda Ethiopia.
Dowladda Federaalka oo Muqdisho ku casuntay Ahllusunnada Galgaduud